Al-Shabaab oo ka dhex dagaallamaya xerada Xalane | KEYDMEDIA ENGLISH
Al-Shabaab oo ka dhex dagaallamaya xerada Xalane
Waxaa jira warar sheegaya in xabaddu ku faaftay ilaa xaruntii hore ee ciidanka Cirka Afisyooni, oo uu ku yaallo hangarkii ay shan sano ka ho ka dhacday doorashadii Madaxweynaha.
MUQDISHO, Soomaaliya – Rag hubeysan oo ka tirsan Kooxda Al-Shabaab, ayaa duullaan ku qaaday, xeyn-daabka garoonka diyaaraha Aadan Cadde, ee magalaada Muqdisho, kaas oo hadda laga maqlayo dhawqa rasaas xooggan oo ay is weydaarsanayaan ilaalada Garoonka iyo kooxda weerarka ah.
Xogo hor-dhac ah ayaa muujinaya jiritaanka khasaare xooggan, waxaana hadda xabaddu ka socotaa waddada ka timaadda dhanka Isbitaalka Yerdemeli ee gasha Garoonka Aadan Cadde, sida uu Keydmedia Online, u sheegay mid ah, howl-wadeennada garoonka.
Dhamaan dhaqdhaqaaqyadii garoonka diyaaraha ayaa hakad la galaiyay [duullimaadyadii gudaha iyo dibaddaba] xilli ay wali gudaha garoonka ku jiraan how-wadeennadii saaka shaqo tagay, waxaana laga cabsi qabaa in is-rasaaseyntu u gudubto dhanka socdaallada.
Idaacadda ku hadasha, afka Al-Shabaab, ay sheegtay in dagaal-yahanno ka tirsan Kooxda, ay gudaha u galeen, xarumo muhiim ah oo ku yaalla gudaha Xalane, halkaasna ku dileen dad caddaan ah, hayeeshee, ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashadooda.
Dhanka kale, waxaa jira warar sheegaya in xabaddu ku faaftay ilaa xaruntii hore ee ciidanka Cirka Afisyooni, oo uu ku yaallo hangarkii ay shan sano ka hor ka dhacday doorashadii Madaxweynaha iyo tan haatan ee qaar ka mid ah xildhibannada baarlamaanka 11-aad.
In Al-Shabaab, duullaan toos ah ku qaadaan aagga maanta xabaddu ka socoto, waxaa ugu danbeysay siddeed sano ka hor, taas oo muujineysaa sida taliska Farmaajo, ugu fashilmay amniga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo ilaaalin goobaha muhiimka ah.
Sidoo kale, goobjoogayaal ku sugan aagga iska hor imaadku ka socdo, ayaa KON, u sheegay in ay arkayaan dab xooggan oo ka kacay mid ka mid ah, kaalimaha shidaalka ee ku yaalla, aagga garoonka diyaaradaha, iyo waddada uu Farmaajo u maro Addan Cadde.
Ma jiro, wax war ah oo ilaa hadda ka soo baxay laamaha ammaanka ee dowladda Federaalka oo ku aaddan duullaanka Al-Shabaab ee xeyndaabka garoonka diyaaradaha. Wixii soo kordha kala soco bogga wararka Keydmedia Online.